Furitaanka Tababarka ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka Seattle - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Furitaanka Tababarka ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka Seattle
Furitaanka Tababarka ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka Seattle
Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Xafiiska Tartanka ee magaalada hoose ee Seattle waxay qortaa layliyo mutadawiciin ah iyadoo lagu saleynayo baahida jirta. Waxaan hadda u baahanahay Qeybta Qorista Shaqada, Haynta iyo Ballaarinta, waxaana codsaneynaa in layliyuhu tabaruce 10-20 saacadood usbuucii, ugu yaraan muddo seddex bilood ah.
Musharrixiinta ugu habboon waxay ku jiri doonaan sannadka yar ama sannadka sare ee kuleejka oo leh 3.3 GPA ama ka sareeya, ama dhowaan dhammaystiray shahaadadooda, ama lagu qoro barnaamijka shahaadada mastarka.
Guud ahaan, waxaan raadineynaa musharixiin mas'uul ah, oo la isku halleyn karo oo si madax-bannaan u shaqeyn kara oo dano dhab ah ka leh arrimaha caalamiga, horumarinta dhaqaalaha, maalgashiga iyo ganacsiga. Waxaan qiimeyneynaa xirfadaha cilmi baarista iyo qorista, Microsoft Office suugaanta, fikirka halista ah, awooda luuqada qalaad iyo kala duwanaanta.
Sifooyinka kale ee aan raadineyno waxaa ka mid ah:
Awood u leh inuu si madax bannaan u shaqeeyo.
Fiiro gaar ah u faahfaahsan.
Khibrad abaabulka munaasabadaha.
Qorista khibrad, gaar ahaan joornaal ama joornaal.
Macluumaadka, Excel, aqoonta PowerPoint.
Ka caawinta howlaha horumarinta ganacsiga iyo dhacdooyinka.
Warshadaha cilmi baarista, isbeddellada ganacsiga, dhiirigelinta, tirakoobka maalgashiga, xogta shaqaalaha.
Qoraal kooban iyo waxyaabo kale.
Isgaarsiinta suuqgeynta, bandhigyada PowerPoint iyo cilmi baaris la xiriirta.
Caawinta mashaariicda gaarka ah.
Tababbarayaashii hore waxay sii wadeen inay la shaqeeyaan la-taliyayaasha maxalliga ah, shirkadaha tiknoolajiyada iyo aerospace, hay'adaha horumarinta dhaqaalaha, hay'adaha ganacsiga federaalka iyo ururrada caalamiga ah.
Si aad u dalbato, u soo dir resume hadda ah iyo warqad dabool ah Mary Ferguson oo ah intern@commerce.wa.gov, IYO sidoo kale ku buuxi foomka dalabka internetka: http://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/business-development/internship-openings/
← Barnaamijyada kaabayaasha dowlad-goboleedyadu waxay maalgashadaan si kor loogu qaado u diyaarsanaanta mashruucyada maxalliga ah Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka wuxuu ansaxiyay $ 85 milyan oo deyn ah kaabayaasha dhaqaalaha →